Ikhefu lomndeni ngempelaviki e-Sun City
Affordable Sun City Family Holiday
Yenza izinkumbulo bese uchitha izinsuku ezingu-3 esihlalweni se-Sun City Resort esihlala emndenini lapho wena nomndeni wakho niyojabulela khona ukuhamba kwamanzi, imisebenzi yomndeni ehlangene futhi niqale umshayeli wezemidlalo womndeni we-epic. Ingxenye engcono kakhulu ngaleli phakheji? Izingane zakho ezingaphansi kweminyaka engu-12 zihlala mahhala.
Sula umndeni wakho kude nendawo yemilingo yaseSun City. Ukuphumula kwe-Weekday Family Family yakho yezinsuku ezintathu kuzokunika isikhathi esanele sokubamba izingane zakho, ukuzibandakanya emisebenzini yomndeni ejabulisayo nokudala izinkumbulo ezingapheliyo.Leli phadi lekhefu lomkhaya laseSun City linomningi wamanzi nemisebenzi yokuzilibazisa ukuze wonke umuntu ajabulele. Ukuphumula okuphuthumayo kusuka e-resort kuyokuyisa ePilanesberg National Park enhle, unike wonke umndeni ithuba lokulandelela umdlalo kuhlanganise ne-Big Five emgwaqeni we-drive safari.
Amaphuzu avelele wePhakheji Lomndeni
Izingane zihlala mahhala
Imisebenzi ejabulisayo yomndeni wonke kusuka egodini elincane, i-pin bowling eyishumi, i-mini quad ngebhayisikili ukuze amanzi ajabule esigodini sama-Waves
Ukuhlukahluka kwemisebenzi enobungane ngabantwana ngaphansi kweso elindile labanakekeli abafanelekayo e-Kamp Kwena (iminyaka engu-4-12)
Vakashela umhlaba wezilwane kanye nenkundla yengwenya eKoena Gardens
Thatha izingane emgwaqweni wezitimela ezungeze i-Waterworld Lake eSitimela isitimela
Qalisa umzila wemoto oqondiswayo ePilanesberg National Park
Usuku 1: Sun City
Abasebenzi abanobungane nabanakekeli e-Sun City Resort bazokusiza ekuhlaleni komndeni wakho. Sebenzisa i-ntambama iqhaza emisebenzini enhle oyikhethayo.
Imindeni efuna izidakamizwa zamanzi, i-Sun City Resort iqukethe imisebenzi ehlukahlukene yamanzi kuhlanganise nemifula yamanzi, i-wakeboarding, i-parasailing, ukugibela i-tube, i-wake-snake, ukuhamba ngezimoto, nokunye okuningi e-Valley of the Waves.
Jabulela isidlo sakusihlwa esimnandi futhi ucabange ngosuku lwakho oluhle. Hlala ubusuku ku-casino noma ujabulele umbukiso we-cabaret ngenkathi izingane zakho zinabantwana abaqeqeshiwe.
Usuku 2: e-Sun City
Ngemuva kokudla kwasekuseni okuhle, wena nomndeni wakho ningasebenzisa intambama ngesivinini sakho.
Kukhona okuningi okuzohlola eSan City Resort, kuhlanganise ne-Maze yeLost City, Kwena Gardens, igalofu elincane ne-Animal World.
Imisebenzi ejabulisayo ifaka igalofu encane, i-scatch punch, i-zip lining, i-quad ngebhayisikili (kufaka phakathi ama-mini quad ngamabhayisikili wezingane) nokunye okuningi.
Izilwane zasendle zihlambalaza - entambeni yentambama ukuya eSood City Welcome Center lapho uzoqala khona umshini wokudlala umdlalo wePilanesberg National Park. Wena nomndeni wakho ningase nithole inhlanhla ngokwanele ukufakaza i-Big Five ngalolu hambo olungenakulibaleka.
Ngemuva kwezinsuku zokusebenza ezithokozisayo, zijabulela ukudla okumnandi komndeni bese uchitha kusihlwa esikhungweni sezokuzijabulisa.
Usuku 3: e-Sun City
Njengoba ulungiselela ukuhamba, ujabulele enye yokudla kwasekuseni yokudla kwasekuseni endaweni yokudlela yehhotela.
Uma izingane zingagcwaliseki imisebenzi okwamanje, mhlawumbe udlale uhlangothi olulodwa lokugcina lwegalofu elincane ngaphambi kokubuyela ekhaya.
Ukuhlala 2 ebusuku ebusuku eCabana Hotel kuhlanganise kwasekuseni
Umdlalo we-ntambama ohleliwe ungena ePilanesberg National Park (amahora angu-2 ½)
I-fuel kanye nazo zonke ezinye izinto ezengeziwe okufanele zixazululwe ngokuqondile